स्प्राइटले दियो ४ जना विजेतालाई बजाज पल्सर मोटरसाइकल उपहार
लोकप्रिय लेमन–लाइम पेय पदार्थ स्प्राइटकोे ‘स्क्रिन टाइम प्रमोशनल अभियान’ अन्तर्गत ‘चिलिंगको स्टार्ट, मोबाइल र स्प्राइटको साथ’ शीर्षकको क्याम्पेन सम्पन्न भएको छ ।
समापनको अवसरमा स्प्राइटले ४ जना भाग्यशाली विजेताहरुलाई एक–एक वटा बजाज पल्सर (१२५ सीसी) मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरेको छ ।
बोट्लर्स नेपालका च्यानल मार्केटिङ म्यानेजर सुमित दास र हंसराज हुलासचन्द एन्ड प्रा.लि.का असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर पुनम सिंहले टेकु स्थित बजाज शोरुममा विजेताहरुलाई मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरे ।
त्यसैगरी विराटनगर, चितवन र हेटौँडाका विजेताहरुलाई पनि चाँडै मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यस्तै यस कार्यक्रमका बाँकी ५ जना विजेताहरुलाई ४३ इन्चको सामसङ टि.भि. र २६३ जना विजेताहरुलाई सामसङ मोबाइल पनि प्रदान गरिएको थियो ।
पर्सा, वीरगन्ज, धरान, ताप्लेजुङ लगायत समग्र नेपालबाट नै उल्लेखनीय सहभागिता रहेको र सोही क्षेत्रहरुबाट विजेताहरु छनोट भएकोले यो अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
बजाज पल्सर १२५ सीसी विजेता सौगात पुलामीले क्याम्पेनमा सहभागि लाखौंँमा छानिएर आफूले बाइक जितेकोमा खुशी लागेको बताए । उनले भने,‘यो मेरो पहिलो बाइक भएकोले म यसलाई अत्यन्तै सम्हालेर राख्नेछु । यो पुरस्कारको लागि म स्प्राइट नेपाललाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
यो क्याम्पेन सेप्टेम्बर १५, २०२१ देखि नोभेम्बर ४, २०२१ सम्म सन्चालन भएको थियो ।
यो क्याम्पेन दिनको महत्वपूर्ण समयमा युवाहरुलाई रिफ्रेश हुन प्रेरित गर्ने उद्धेश्यको साथ शुरु गरिएको स्प्राइटको “क्लियर छ “ क्याम्पेनको एउटा हिस्सा थियो ।
यो क्याम्पेनको टि.भि.सी.मा अनमोल के.सी. लाई छायांकन गरिएको थियो ।
नेपाली बजारमा सोमवार सुनचाँदीको मूल्य स्थिर छ । अघिल्लो दिन ९३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको सुन सोमवार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस...
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आज ठूलो गोलभेँडा (नेपाली) ५० देखि ६० रुपैयाँसम्ममा कारोबार भइरहेको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास बोर्डले निर्धारण गरेको थोक मूल्यसूची अनुसार रातो आलुको मू...
नेपाली बजारमा बिहीवार सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । यस दिन छापावाल सुन प्रति तोला ९३ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिन यस्तो सुन प्रति...
नेपाली बजारमा मंगलवार सुनको मूल्य बढेको छ । यस दिन छापावाल सुन प्रति तोला ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिन यस्तो सुन प्रति तोला ९३ हजार ५ सय...